Isku-darka Midabka – Color Combinations
Gospike.net macluumaadka siinaya cabir midab leh sawirro ah si otomaatig ah ka dib marka aad geliso qalabka xulashada midabka. Marka ay kugu adkaato inaad hesho in ka badan sagaashan midab, websaydhkan ayaa bixiya aaladaha cabbirka saxda ah ee loogu talagalay midabada sawirada. Gospike.net waxay soo saartay qalab lagu doorto midabka saxda ah, oo laga heli karo cabbir, wakhti kasta iyo goob kasta. Markaad internetka ku xiriirto, aaladda ayaa buuxin doonta oo heli doonta cabir midab leh oo tusi liiska midabka aad rabto. Tusaale ahaan waa sawirka midabka, magaca midabka, cabirka midabada iyo isku darka midabada. Tani waa goob aad u wanaagsan. Sababtoo ah waxaa jira midabbo badan oo la ogaadey iyo cabirka. Faa’iidooyinka kale waa liiska xajmiga midabka si dhakhso leh.
Marka, sahm oo ku raaxee boggan si aad uhesho midabyo kala duwan.
Guud ahaan, midab dhalaalaya wuxuu siiyaa aragti farxad leh oo farxad leh. Adeegsiga midabku wuxuu ku tiirsan yahay qof walba. Sida midabka qolka jooga oo la rumeysan yahay inuu kicin karo firfircoonida maskaxda iyo maskaxda. Haddii midabku ku habboon yahay oo aad jeceshahay midabka, tani waxay xitaa saameyn ku yeelan kartaa kordhinta xirfadahaaga falanqaynta. Midabku wuxuu saameyn badan ku leeyahay noloshan iyo maskaxdeenna. Adeegsiga dhowr nooc oo midabyo ah, midabada buluugga ah ee badanaa la xiriira xirfad-yaqaannimada iyo aaminaadda. Intaas waxaa sii dheer, midabada buluuga ah waa mid ka mid ah midabada aasaasiga ah waxayna isku dari karaan midab kale, tusaale ahaan waa isku dhafka midabka aasaasiga ah haddii midabada buluugga ah lagu shubo midabbo kale oo aasaasi ah sida midabbado huruud ah sidaa darteedna natiijooyinku waa midab cagaaran. Laga yaabee, tani waa sababta sababta midabkani u jecleystay. Sidaa darteed, midabkani waa mid aad u habboon in lagu isticmaalo qol. Waxyaabaha aan ahayn buluugga, beige iyo brown waxay sidoo kale noqdaan midabyo ay dad badani jecelyihiin, waxay ku isticmaalayaan midab darbigooda. Hadana, midabka jilicsan ayaa sidoo kale caan ku ah gaar ahaan dhalinyarada. Marka laga reebo midabada aasaasiga ah, isku darka midabaynta iyo giraan isku dhafka midabka oo noqonaya muuqaal gaar ah websaydhkan, waxaa sidoo kale jira noocyo kala duwan oo naqshadaha guryaha ah iyo rinjiyeynta sidoo kale xiisaha leh marka loo eego midabka. Sababtoo ah, laga bilaabo midabada aasaasiga ah iyo midabada isu-gaynta oo bixiya websaydhkan, waxaan ku dalban karnaa midabada derbiga, alaabta guriga ama rinjiyeynta. Websaydhkan, rinjiyeyn badan oo Gudaha iyo naqshadeynta Dibedda ah oo aad ka heli karto ama soo dejiso. Midabbo badan oo midabbo ah ayaa gidaarka ka dhigi kara qurux iyo raaxo leh meel la dhigo. Naqshaddii lagu dhammeeyay qurxin cajiib ah, waxay noqon kartaa dhiirigelin aad u qurxisay gurigaaga. Qaabka faahfaahsan ayaa si buuxda looga dhex muuqan doonaa websaydhkan. Ma aha oo kaliya qayb ka mid ah guriga laakiin sidoo kale qol kasta oo leh qurxinta. Tusaale ahaan, naqshada qolka jiifka oo ku rakiban sariirta guga, barkimooyin, barkimo, saqafka guriga, laambadda hurdada iyo nashqadeynta derbiga iyo naqshada saqafka. Iyada oo xulashooyin badan oo naqshadeyn ah iyo fikradaha naqshadeynta, ay kuu fududaanayso oo waxaa loo tixgelin karaa tixgelintaada doorashada naqshada iyo midabada ku habboon gurigaaga.